Fumax waxay u dhisi doontaa ICT guddi kasta si loo tijaabiyo iskuxirka guddiga iyo shaqooyinka.
ICT, oo loo yaqaan 'In-Circuit Test', waa habka tijaabada caadiga ah ee lagu baarayo cilladaha wax soo saarka iyo cilladaha qaybaha iyadoo la tijaabinayo guryaha korantada iyo isku xirnaanta korantada ee qaybaha internetka. Waxay inta badan hubisaa qaybaha kaliya ee khadadka iyo wareegga furan iyo gaaban ee shabakad wareeg kasta. Waxay leedahay astaamaha goobta khaladka fudud, dhakhsaha iyo saxda ah. Habka tijaabada ah ee heerka qaybaha ah ee loo isticmaalo in lagu tijaabiyo qayb kasta oo ka mid ah guddiga wareegga ah.
1. Waxqabadka ICT:
Imtixaanka khadka tooska ah ayaa badanaa ah nidaamka ugu horeeya ee tijaabada wax soo saarka, kaas oo ka tarjumi kara xaaladaha wax soo saarka waqtiga, taas oo ku habboon geedi socodka hagaajinta iyo kor u qaadista. Guddiyada cilladaysan ee ay tijaabisay ICT, sababo la xiriira goobta cilladda saxda ah iyo dayactirka habboon, waxay si weyn u horumarin kartaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka waxayna yareyn kartaa kharashka dayactirka. Sababtoo ah walxaha tijaabada ah ee gaarka ah, waa mid ka mid ah hababka tijaabada ee muhiimka u ah hubinta tayada wax soo saar ballaaran oo casri ah.
2. Farqiga u dhexeeya ICT & AOI?
(1) ICT waxay ku tiirsan tahay astaamaha korantada ee qaybaha elektaroonigga ah ee wareegga si loo hubiyo. Astaamaha jireed ee qaybaha elektarooniga ah iyo guddiga wareegga waxaa lagu ogaadaa waqtiga dhabta ah, danab, iyo inta jeer ee mowjadda.
(2) AOI waa aalad ogaata cilladaha guud ee la soo dersa wax soo saarka alxanka iyadoo lagu saleynayo mabda'a indhaha. Sawirada muuqaalka ee qaybaha guddiga wareegga ayaa si indha indheyn ah loo baarayaa Wareeg gaaban waa la xukumaa.
3. Farqiga u dhexeeya ICT & FCT：
(1) ICT inta badan waa tijaabo joogta ah, si loo hubiyo cilladaha ka imanaya qaybaha iyo cilladda alxanka. Waxaa lagu fuliyaa habka xiga ee alxanka guddiga. Guddiga dhibaatada leh (sida dhibaatada alxanka gadaal iyo wareegga gaaban ee qalabka) si toos ah ayaa loogu hagaajiyaa khadka alxanka.
(2) Tijaabada FCT, ka dib marka korontada la bixiyo. Qaybaha keli ah, looxyada wareegga, nidaamyada, iyo tusaalayaasha xaaladaha isticmaalka caadiga ah, hubi doorka waxqabadka, sida korontada shaqada ee guddiga wareegga, shaqada hadda jirta, awoodda heeganka, in qalabka xusuusta uu wax aqrin karo oo qori karo sida caadiga ah ka dib awoodda, Xawaaraha ka dib marka mootada la shito, xarunta channel-ka ee iska caabinta ka dib gudbinta la shiday, iwm.
Isku soo wada duuboo, ICT waxay inta badan ogaataa in qaybaha guddiga wareegga si sax ah loo geliyay iyo in kale, iyo FCT waxay inta badan ogaataa in guddiga wareegga shaqadu si caadi ah u shaqeeyo.